🍒Fastpay cha cha - Ndebanye aha, Ebe nrụọrụ gọọmentị, nkwenye
FastPay Casino >Nyochaa usoro ndebanye aha ịgba chaa chaa FastPay
Nyochaa usoro ndebanye aha ịgba chaa chaa FastPay
Iwu ndebanye aha cha cha n'ịntanetị
Nkwado nkwado maka ndị ahịa ọhụrụ
Usoro okike okike
Nyocha njirimara na FastPay Casino
Emechi na"kefriza" akaụntụ
Otu esi eme nzo mbu gi na Fastpay?
pnye ikikere FastPay cha cha bụ oru ngo mba ofesi nke ewepụtara n'oge ọkọchị nke 2018. Ọ na-enye ndị niile na-agba chaa chaa egwuregwu nnukwu katalọgụ nke egwuregwu maka uto ọ bụla - site na egwuregwu okpokoro okpokoro iji belata oghere oghere. Ọ dị mfe ịbụ onye ahịa nke cha cha a - ndebanye na cha cha FastPay anaghị ewe oge.
Weebụsaịtị gọọmentị Fastpay na-arụ ọrụ n'ime usoro iwu ịgba chaa chaa mba ụwa, dabere na ikikere na ikike nke Curacao. Maka nke a, naanị ndị karịrị afọ 18 n'oge ndebanye aha nwere ike bụrụ ndị ahịa cha cha.
Iwu nke abụọ dị mkpa bụ otu akaụntụ. Online casinos na-amachibido ịmepụta ihe karịrị otu akaụntụ ịgba chaa chaa kwa onye. Ndị bi n'ọtụtụ mba ụwa nwere ike ịghọ ndị ahịa FastPay, belụsọ maka mba ndị a:
Portugal, Gibraltar, France na mpaghara mba ofesi ya;
Egwuregwu ụfọdụ sitere na katalọgụ nwere ike ọgaghị adị maka ụfọdụ mba.
N'oge usoro ndebanye aha, onye ọkpụkpọ ahụ na-amalite ịmụ iwu niile nke cha cha n'ịntanetị ma kwenye na ha. A na-atụ aro ka ị ghara ileghara usoro a anya, ịmara iwu ga-ezere ọtụtụ esemokwu.
lationda iwu nke FastPay nwere ike ibute igbochi akaụntụ.
Ndị ọrụ niile debanyere aha na FastPay nwere ike ịdabere na nkwụnye ego nkwụnye ego mbụ. Ọnụ ego kachasị akwụ ụgwọ bụ 100 USD/EUR ma ọ bụ 865 NOK, 127 CAD, 130 AUD, 138 NZD, 375 PLN, 1500 ZAR, 10650 JPY, 0.01 BTC, 1.9 LTC, 0.256 ETH, 0.05 BCH, 44000 DOGE ... A na-agbakọ ego ego ego dabere na 100% nke nha nke nkwụnye ego ahụ.
A na-arụ ọrụ ego ahụ mgbe akaụntụ ahụ mejupụtara, koodu mgbasa ozi adịghị mkpa. Dị ka mgbakwunye, onye ọkpụkpọ ahụ na-enweta 100 free spins na igwe oghere. Ha na-akwụ ụgwọ kwa - 20 free spins n'ime ụbọchị 5 site na ụbọchị nke nkwụnye ego.
Iji gbanwee ego ego gaa ezigbo ego, ịkwesịrị itinye nzo na ego ga-abụ 50 ugboro ole ego nke ego a na-enweta.
FastPay nwere ego nkwụnye ego nke abụọ. A na-ebo ya ebubo n'ụdị 75% nke ego nkwụnye ego. Ego a dị okpukpu abụọ karịa ego nkwụnye ego mbụ.
can nwere ike ịdebanye aha maka FastPay cha cha na isi saịtị, ma ọ bụ na enyo ya. Ndebanye aha dị na kọmputa, smartphone na mbadamba.
Iji mepụta akaụntụ, pịa bọtịnụ"Deba aha". Ọ dị n'elu saịtị ahụ, acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Pị bọtịnụ ahụ ga-arụ ọrụ mpempe ndebanye na mpaghara ndị a:
okwuntughe - a na-atụ aro ya ịkọwapụta njikọta kachasị sie ike;
ego - ịkwesịrị ịhọrọ otu n'ime ego ndị dịnụ - USDT, USD, EUR, DOG, BCH, LTC, ETH, BTC, ZAR, JPY, PLN, NZD, AUD, NOK, CAD.
Achọrọ ubi niile. Onye ọrụ ga-enyocha igbe"Ekwenyere m na iwu." Na ndebanye ndebanye, ịnwere ike ịdenye aha na listi nzipu ozi nkwado, ma ọ bụ wepu aha na ya. Akwụkwọ akụkọ ahụ gụnyere onyinye na-adọrọ mmasị, akụkọ cha cha. You nwere ike megharịa ya na akaụntụ nkeonwe gị.
Mgbe ịpịrị bọtịnụ"Debanye aha, ụlọ ịgba chaa chaa ga-eziga akwụkwọ ozi nwere njikọ na e-mail ahụ akọwapụtara. Achọrọ ya maka ịmalite - onye ọrụ nwere ike pịa njikọ ahụ na leta ahụ, ma ọ bụ detuo ma mado ya na ogwe adreesị nke ihe nchọgharị ahụ. Ọ bụrụ na ozi si na FastPay adịghị na Igbe mbata gị n'ime nkeji iri atọ, ị ga-emepe Spam folda ahụ, ebe ozi ahụ ga-enweta n'amaghị ama.
Ntinye akaụntụ na-enye gị ohere ịbanye na paswọọdụ na email. Na akaụntụ nkeonwe gị, ịkwesịrị ịmepe profaịlụ ma jupụta na ozi efu banyere onwe gị. Ihe data niile aghaghi izi ezi. Nwere ike itinye ego akaụntụ ndị ọzọ na akaụntụ gị - cha cha anaghị ejedebe ndị ahịa ya na otu ego.
Naanị ndị ọrụ ekwuputara nwere ike iji ọrụ cha cha niile n'ịntanetị. Wepụ ego na akaụntụ egwuregwu na-emeghe naanị mgbe njirimara nke onye ahụ gasịrị. FastPay nwere ike ịrịọ nkwenye n'oge ọ bụla, mana ọ ka mma ịme ya n'onwe gị ozugbo aha dechara.
Cha cha cha cha nkwa nchekwa nke data nkeonwe. Maka nkwenye, ịkwesịrị imeghe ibe"Akaụntụ" na akaụntụ nkeonwe gị ma gaa na ngalaba"Akwụkwọ". N'ebe a, ịkwesịrị bulite nyocha ma ọ bụ foto nke paspọtụ gị, ma ọ bụ akwụkwọ ọzọ nwere ike igosi njirimara gị. Ihe onyonyo a gha aghaghi mma.
Dị ka mgbakwunye na paspọtụ, ị nwere ike ịchọ nkwupụta ụlọ akụ, akwụkwọ ọnụahịa maka ịkwụ ụgwọ nkwukọrịta, wdg. Akwụkwọ ahụ ga-enwerịrị aha nke dabara na paspọtụ. Oge kachasị maka ịlele akwụkwọ ezigara bụ 24 awa. Cha cha nwere ikike ịrịọ akwụkwọ ndị ọzọ, vidiyo ma ọ bụ oku ekwentị.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara njirimara onwe gị, ndị egwuregwu nwere ike ịkpọtụrụ nkwado. Ọ na-arụ ọrụ 24/7 ma dị site na nkata ndụ na email.
Ndị ahịa cha cha na-akwụ ụgwọ na ntanetị nwere ikike ihichapụ akaụntụ akaụntụ egwuregwu ha n'oge ọ bụla. Enwere ike imechi akaụntụ ahụ site na ịkpọtụrụ ndị na-akwado ya.
Ọ bụrụ na onye ọkpụkpọ abanyeghị na akaụntụ nke aka ya maka ọnwa 6, etinyeghị nzo ma ọ nweghị nkwụnye ego, yabụ kwụsịtụrụ akaụntụ ya. Ifriizi na akaụntụ abụghị mmechi, enwere ike imegharị ya.
can nwere ike tinye nzọ na cha cha ozugbo ị debanyere aha. Ego na-akwụ ụgwọ ozugbo. Ego nkwụnye ego pere mpe bụ 0.01 BTC, 14 NZD, 10 EUR/USD, 37 PLN, 13 CAD, 4400 DOGE, 0.2 LTC, 13 AUD, 151 ZAR, 0.05 BCH, 1060 JPY, 0.025 ETH, 87 NOK. Thelọ cha cha anaghị akwụ ụgwọ ọrụ maka mmeju, mana enwere ike ịtọ ya site na usoro ịkwụ ụgwọ.
Mgbe emechara ego ahụ, ọ ka ga-ahọrọ egwuregwu kwesịrị ekwesị. FastPay na-enye igwu egwu igwe, egwuregwu okpokoro, Live cha cha na ndị na-ere ahịa ndụ. Ihe karịrị egwuregwu 1000 dị na saịtị ahụ. Enwere ike ịnwale igwe oghere na ọnọdụ nnwere onwe. Enwere oghere dị iche iche maka ịkụ nzọ na cryptocurrency.
Ndị ahịa ọhụụ nke cha cha cha cha cha cha chara chara abụrụ ndị so n'usoro iguzosi ike n'ihe. Enyere ihe maka iji ọrụ FastPay arụ ọrụ. Ha na-ekpebi ogo nke onye ọkpụkpọ na mmemme iguzosi ike n'ihe. Ọkwa ọ bụla na-enye ihe ùgwù nke ya. Dịka ọmụmaatụ, ndị egwuregwu nwere ọkwa nke abụọ na ọkwa dị elu nke cha cha na-enye onyinye ụbọchị ọmụmụ.
Enwere ike ịgbanwe ezigbo ego ma ọ bụ isi ọnọdụ maka ezigbo ego. You nwere ike ịme mgbanwe otu ugboro n'afọ - na izu ikpeazụ nke Disemba.
Ndebanye aha na FastPay na-emepe ohere dị ukwuu nye ndị na-akwado igwe eji egwu egwuregwu na egwuregwu ndị ọzọ ịgba chaa chaa. Ọ dị mfe ịdebanye aha na saịtị ahụ - ịkwesịrị dejupụta mpempe akwụkwọ dị mkpirikpi. Casinolọ cha cha ahụ na-arịọ njirimara iji gosipụta njirimara ahụ - nke a bụ usoro ọkọlọtọ na ụlọ ọrụ cha cha niile n'ịntanetị.